मधेशी मोर्चाका नेतृत्वहरु अहिले सम्म पछिल्लो घटनाक्रमको वारेमा खुलेर बोलेका छैन र बोल्न पनि चाहदैन । तर उनीहरु बाहिर नबोले पनि चुप त पक्कै नहोलान ? ३० दलीय मोर्चामा प्रचण्डलाई सरकारको कुरा अगाडी नवढाउन सुझाएका गच्छदार वाहेकका अन्य मधेशी नेतृत्वहरु त्यसो भए के गर्लान ? उत्तर अहिले उनीहरु संगै पनि छैन । नेताहरुका अनुसार गच्छदार वाहेकका महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो विच छुटै मोर्चा बनाउन पहिला पनि प्रयास नभएको होईन तर ठाकुर अस्विकार गरिदिदा यादव र महतो पछि हटेका थिए । प्रचण्डले अहिले फेरी एकचोटी यीनीहरुको सहमती वेगर गच्छदारलाई लिएर अघि वढे पछि के ठाकुर, यादव र महतो विचको उक्त छुटै मोर्चाको प्रयास होला कि ?
फोरम नेपालका एक उच्च नेताका अनुसार त्यो सम्भवना पनि त्यतीकै छन । किन कि सरकारमा गच्छदारले आफु भन्दा वढी हैसियत पाउने भए पनि उपेन्द्र यादव सहभागी हुने सम्भावना अत्यद्यिक कम भएर जाने छन । फोरम नेपालका ती नेताका अनुसार यादव यी तीन मधेशी पार्टीहरु र केही जनजातीहरु लाइ मिलाएर छुटै अघि वढनु पर्ने पक्षमा छन ।
सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो निकट एक नेताका अनुसार राष्टिय सरकारको अहिले चलीरहेको चर्चामा प्रमुख दलहरु मधेशी पार्टीहरु संग छलफल कसरी अगाडी वढाउने छन, त्यो आधारमा धेरै कुरा निर्भर गर्ने छन । उनका अनुसार यदी प्रमुख दलहरु मधेशी पार्टीहरु संग नयां संविद्यानको वारेमा र संघियताको वारे प्रष्ट भएर कुनै सहमतीको खाका ल्याएको खण्डमा त्यसले साकारात्मक वातावरण समेत सिर्जना गर्न सक्छ । तर याहा निर पनि गच्छदारलाई समस्याको रुपमा ती नेता हेर्छन । गच्छदारको हुरफन्दीका कारण त्यसका लागी पनि पहिला मधेशी पार्टीहरु विचमै एकमतको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तमलोपाका सहअध्यक्ष हृदेश त्रिपाठीले गएको शुक्रवार मात्रै दलानसंगको प्रतिक्रियामा आफुहरु नयां सरकारको खेलमा नलाग्ने वताएका थिए । तर तमलोपाकै अर्का एक नेताका अनुसार महाभुकम्प पछिको यो विनासको अवस्थामा राष्टिय सरकारको अवधारणा लाई साकारात्मक रुपमै लिनु पर्ने बताए । तर उनले पनि त्यसलागी प्रमुख दलहरु सहित मधेशी पार्टीहरु विच एउटा ठोस अवधारणको विकास हुनु पर्नेमा जोड दिन्छन । उनी भन्छन, अनि मात्रै गच्छदार वाहेकका अन्य मधेशी पार्टीहरु सरकारमा जानका लागी तयार हुने वातावरण बन्न सक्छन ।